Asking for Correct Payment Workflow - MYSTERY ZILLION
Asking for Correct Payment Workflow
Site မွာ Thirdparty Payment Api တခုနဲ့ Implement လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒီမွာ Payment လုပ်ဖို့အတွက် Thirdparty ဘက်ကိုမသွားခင် -
Order Ref No.
Success URL (Eg., http://example.com/payment/success?o=ABC123)
Fail URL (Eg., http://example.com/payment/fail?o=ABC123)
စတာ တွေကို callback values တွေ အနေနဲ့ထည့်ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ Thirdparty Payment ဘက်က Success ပြန်လာမှ Order create လုပ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Thirdparty ဘက်မွာ Payment က Fail ဖြစ် လို့ Fail URL ကိုပြန်လာရင် Order create မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ Fail message ပဲပြလိုက်ပါတယ်။ ဒါက လက်ရှိလုပ်ထားတဲ့ flow ပါ။
မေးချင်တာက အကယ်၍ User က Thirdparty Payment site ကိုမသွားဘဲ၊ Payment တကယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ Success URL ကို ဒီအတိုင်း Address bar ကနေ ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်း Order create လုပ်သွားမှာ ဖြစ်လို့ အဲဒီအားနည်းချက်ကို ဘယ်လိုကွာကွယ်ရမလဲ၊​ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ လို့ မေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Sorry, what font are you using ? we cannot read. Please use Zawgyi only.
POST method ကို အသုံးပြုပါ။ Hashing ကို အသုံးပြုပါ။
callback value တွေက ပုံမှန် အားဖြင့် POST နှင့် ပြန်လာတာ များပါတယ်။ GET နဲ့ ပြန်လာတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် hash value ပါပါတယ်။
အခုလည်း Thirdparty ကို Reqeust လုပ်ရင် POST နဲ့ပဲ လုပ်ပါတယ်။​ ဒါပေမယ့် သူ့ဘက်က Payment Success ဖြစ်လို့ပြန်လာရင် callback value တခုဖြစ်တဲ့ Payment Success URL က ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း http://example.com/payment/success?orderRef=ABC123 အတိုင်းပဲပြန်တယ်အကို။ ပြန်လာတာကတော့ GET နဲ့ပဲပြန်ပါတယ်။ Hashing က ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲအကို။
ဘယ် payment သုံးလဲတော့ မသိဘူး။ ပုံမှန် အားဖြင့် payment gateway တွေ return ပြန်ရင် front end url နှင့် backend url ကို return ပြန်ပါတယ်။
front end url က success/fail ပြဖို့ပါ။ backend url ကတော့ server to server အလုပ်လုပ်သည့် အပိုင်းပါ။
hashing ဆိုတာကတော့ ကြားထဲမှာ data တွေ မပျောက်သွားအောင် စစ်သည့် သဘောပါ။
မှာ ရေးထားဖူးပါတယ်။ server ဘက်က support လုပ်မှသာ အလုပ်လုပ်ပါမယ်။
success/fail က transaction ID information တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြန်ရင်တော့ payment gateway မဟုတ်လောက်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ် အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတာကြောင့်ဖြစ်မယ်။ အန္တရယ် အရမ်းများတယ်။
success/fail ကိစ္စကို server to server backend call မှ သာ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Doc မှာ သေချာပြန်ဖတ်ကြည့်တော့မှ သူ့မှာ Order placing update လုပ်ဖို့အတွက် Datafeed ပို့ပေးတာပါတယ်အကို။ အဲဒါကို server ဘက်ကနေ receive လုပ်ပြီး order update လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ callback ပြန်တဲ့ url တွေကိုတော့ frontend only ပဲပြလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေသွားပါပြီအကို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်